केरा खानेले छोरा जन्माउने सम्भावना धेरै! | Nepal Online Patrika
Home स्वास्थ्य केरा खानेले छोरा जन्माउने सम्भावना धेरै!
Nepal Online Patrika| Kathmandu: पितृ सत्तात्मक देशमा छोराको महत्व धेरै हुन्छ । जति धेरै शिक्षित परिवार भएपनि छोरा र छोरीबीचको विभेदको कुरा बाहिर आउने गरेको छ धेरैले छोराकै चाहानाका कारण पारिवारिक सम्बन्ध विगारेका पनि छन् । छोराको चाहाना राखेकै कारण गर्भपतनको क्रम पनि बढेको छ ।तर, यस्ता केही सोच र भनाईहरु छन् जसको प्रयोगले छोराको रहर पुरा हुन्छ । एक अध्ययनको नतिजा अनुसार तपाईंलाई हामी भन्दैछौं केरा खाए छोरा जन्मने सम्भावना हुन्छ । तपाईं पत्याउनुहुन्छ?
यस्ता छन् फर्सीको मुन्टा खानुका फाइदा:
फर्सीको मुन्टा खानुका फाइदा:
Previous articleमहादेबलाई देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी भेटी स्वरुप Share गर्दै, भदौ १६ गते मंगलबारको राशीफल हेर्नुहोस् ।
Next articleभारतमा निर्माण हुने Corona Vaccineको मूल्य ३ देखि ६ डलरसम्म पर्ने